Maitiro ekurova Kushungurudzika zvinoenderana neBhaibheri ▷ ➡️ Tsvaga Pamhepo ▷ ➡️
Maitiro ekukunda kushushikana maererano neBhaibheri. Chinhu chekutanga kunzwisisa nezve kushushikana ndechekuti iri kusagadzikana kwepfungwa izvo zvinokanganisa manzwiro edu anoita kusava neushingi uye kusuwa kusingaperi. Kuenda kuburikidza nekushungurudzika kunogona kuve kwakaomesesa mamiriro muhupenyu. Naizvozvo, kana iwe uri kuburikidza nazvo, iwe unofanirwa kuziva izvo nerubatsiro rwaMwari uye nehunyanzvi kurapwa, zvinokwanisika kubuda zvine simba.
Pasina kuenda kumberi, ivo vega Bhaibheri rinotaura nyaya yevanhu vakati wandei vaive vakaora mwoyo. Asi Mwari akavabatsira yenyika iyoyo. Izvi zvipikirwa zvina kubva kuna Mwari zvinogona kukubatsira iwe kukunda kushushikana:
1 Maitiro ekurova Kushungurudzika maererano neBhaibheri mumatanho mana
1.1 1. Hausi wega
1.2 2. Mwari achakunyaradza
1.3 3. Mufaro uchadzoka
1.4 4. Une ramangwana
Maitiro ekurova Kushungurudzika maererano neBhaibheri mumatanho mana
Kukunda Kushungurudzika maererano neBhaibheri
1. Hausi wega
Kunyangwe munguva dzinosuruvarisa, paunonzwa kusurukirwa, Mwari anewe. Hapana chinogona kukuparadzanisa nerudo rwaMwari. Kuva nekushushikana hazvireve kuti Mwari akusiya. Munguva dzese dzehupenyu Mwari ari kudivi rako kuti akubatsire.
"Mwari pachawo akati:" Handimbokusiyai, handingambokusiyii «.
Izvo zvandine chokwadi chekuti kana rufukana hupenyu, kana vatumwa, kana ukuru, kana masimba, kana zviripo, kana zvichauya,
kana kukwirira, kana udzamu, kana chimwe chinhu chakasikwa, hazvingakwanise kutiparadzanisa nerudo rwaMwari, rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu.
2. Mwari achakunyaradza
Mwari ndiMwari werudo uye vachakunyaradzai. Jesu akararama pasi pano semunhu uye akasuwawo. Anonzwisisa manzwiro aunoita. Unogona kuvimba naMwari, Haazokukuvadze. Mwari vachakupodza uye vokupa nyaradzo yaunoda.
"Vakaropafadzwa vanochema; nekuti ivo vachanyaradzwa".
Nechikonzero ichi, aifanirwa kunge akaita sehama dzake mune zvese, kuti ave mupristi mukuru ane tsitsi uye akatendeka kuna Mwari, kuregerera zvivi zvevanhu.
Nekuti iye sezvaakatambudzika achiidzwa, iye unogona kubatsira ivo vanoidzwa.
VaHebheru 2: 17-18
3. Mufaro uchadzoka
Kusuruvara hakugare nekusingaperi. Zvinogona kuita senge hazvisi kuzopera, asi zvichaguma! Mwari anovimbisa kuti Achadaro! Kusuruvara kwako kuchashanduka kuve mufaro. Tenda uye mirira nemoyo murefu kumufaro waMwari.
Avo vanodyara nemisodzi, nenziyo dzemufaro, vachakohwa. Uyo anobuda achichema achidyara mbeu achadzoka nenziyo dzemufaro, achiunza zvisote zvavo ”.
Mapisarema 126: 5-6
Makashandura kuchema kwangu kukava kutamba;
Makasunungura masaga uye mukasunga chiuno changu nomufaro;
Pisarema 30: 11
4. Une ramangwana
Pane tariro kwauri! Mwari vane zvirongwa zvakanaka pamusoro pako. Kana usingawani tariro yeramangwana, vimba naMwari. Ramangwana rako riri mumaoko aMwari uye zvirongwa zvake kwauri zvakanaka kwazvo. Vanhu veIsrael vakaonawo nzira yekubuda nayo, asi Mwari akavazarurira Gungwa Dzvuku! Mwari achaita chishamiso oshandura hupenyu hwako.
"Nekuti ndini ndinoziva zvirongwa zvandinazvo pamusoro pako," vanodaro Ishe, "zvinoronga kubudirira kwete kukukuvadza, kuronga kukupa tariro uye neramangwana."
“Mweya waIshe, Ishe uri pamusoro pangu; nekuti Jehovha akandizodza kuti ndiparidze evhangeri kuvarombo. Akandituma kuti ndichengete vane mwoyo yakaputsika, kuti zivisai kusunungurwa kunhapwa, nekusunungurwa kubva murima kuvasungwa, kuti ndiparidzire gore rekunaka kwaIshe, uye nezuva rekutsiva raMwari wedu; kunyaradza vese vanorwadziwa, uye kupa vese vanochema muZion korona yakanaka panzvimbo yemadota, mafuta emufaro pane kuchema y jasi rerumbidzo panzvimbo pemweya wakasuwa. Vachanzi miouki yokururama, chakasimwa chaIshe; kuitira kubwinya kwake.
Isaya 61: 1-3
Rangarira kuti Mwari anogara aripo padivi pako. Nekudaro, nhanho yekutanga yekubuda mukushushikana inofanirwa kutorwa newe. Rimwe nerimwe rezano ratakupa harina maturo kana ukabatirira pane kutenda kuti haugone kubuda mugomba remanzwiro raunozviwana uri. Naizvozvo, tinokurudzira kuti iwe ubvunze nyanzvi kuti ibatsirwe. Uchibatsirwa naMwari, kuda kwako kuchaita zvakasara.
Izvi ndizvo zvazviri! Tinovimba iwe wave kuziva nzira yekukunda kuora mwoyo zvinoenderana nebhaibheri. KANA iwe uchifarira kuziva nei zvichikosha kuenda kuchechi kune muKristu, ramba uchivhura Ziva.online.
Maitiro ekudzora kushushikana uchishandisa bhaibheri